Nceda uqaphele, ukuba i-OutBüro ayisiyo-non-profit / NGO, ke ayisiyiyo irhafu yase-US. Endaweni yokuba unegalelo ekuxabiseni into endiyenzileyo / esiyenzileyo ukuza kuthi ga ngoku kunye nenjongo kunye nembono yethu ekufuneka siyifezekisile. Kukunceda ukuqala ngesiqalo se-bootstrap esizinikezele kuwe nakwifayile ye- LGBTQ + uluntu lwehlabathi olungena ndleko kumalungu esiza ngokubanzi. Mna nawe sikunika yonke imihla kuwe. Ngaba uzakuwujonga umnikelo wezezimali ukuxhasa i-OutBüro namhlanje?
I-COVID yayineengxoxo zabaqeshi kwangoko ezichithakeleyo ngenxa yokudendwa kunye nohlahlo-lwabiwo mali olunqabileyo. I-OutBüro yinkonzo kwihlabathi liphela LGBTQ + uluntu kunye nemodeli yethu ngabaqeshi bahlawula ukuthatha inxaxheba. UDennis Velco usebenze engayeki ngaphezulu kweminyaka emi-2 esebenza iiyure eziyi-10-12 ngosuku ngokomyinge weentsuku ezisi-7 ngeveki. Umnikelo wakho onesisa uya kunceda ukugcina i-OutBüro iqhubeka ngelixa uqoqosho lwasemva kwe-COVID luchacha kwaye uhlahlo-lwabiwo mali lomqeshi luvulekile ukuze bazimanye nathi kwi-OutBüro kwaye nabaqeshi baxhasa ngemali ukukhula kwethu. Ndiyanibulela ngokuthobekileyo ngokuthathela ingqalelo ukuxhasa i-OutBüro, injongo yayo, kunye nombono wayo.
Singayithanda ingxelo yakho. Kutheni i-OutBüro ixabisa kuwe nakuluntu?
Ngaba uvulekile ukuba udweliswe kwiphepha lomxhasi kule ndawo?
Nceda unikeze isixa semali